KASHIFAAD: Dowladda Somalia Maxay u qarisaa tirada Dadka laga baaray Cudurka Coronavirus..? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dowladda Soomaaliya ayaa joojisay inay shaaciso tirada dadka laga baaro cudurka Coronavirus, waxayna wasaaradda Caafimaadka xukuumadda Federaalka ay kaliya sheegtaa tirada dadka laga helay cudurka.
Waxay hore wasaaradda caafimaadka u shaacin jiray tirada maalinlaha ee laga baaro cudurka Covid-19 iyo inta laga helay, waxayna joojisay markii dood badan ka dhalatay baraha bulshada oo ku saabsan sida dadka la baaro intooda badan looga helo cudurka.
18-kii April 2020 ayaa ugu danbeysay in wasaaradda Caafimaadka ay shaaciso tirada maalintii laga gaaro cudurka, iyo inta laga helo, waxaana maalintaasi warbixintii ay soo saartay ay ahayd sidatan:
Warbixinta Maanta 18/04/2020 Kiisaska maanta la baaray
La baaray 25 qof
Laga helay 19 qof
Lab 15 qof
Dhedig 4 qof
Dhimasho 2 qof
Tirada guud ee laga baaray cudurka Coronavirus Soomaaliya oo dhan waxay ahayd 16-kii April 222 qof, sida ku cad shaxda hoose.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya marna sooma hadal qaado tirada guud ee laga baaray cudurka intii baaritaanku cudurkani uu bilowday, waxayna arrintaas qeyb weyn ka qaadan lahayd in la ogaado heerka uu gaarsiisan yahay cudurka, iyadoo aan la ogeyn sababta loo qarinayo qodobkan muhiimka ah.
Dalalka Dunida waxaa lagu qiyaasaa heerka uu cudurku Coronavirus ka joogo hadba tirada guud ee dadkooda iyo baaritaanka ay sameeyeen, taasoo lagu qiimeyn karo shaqada ay hayaan wasaaradaha caafimaadka iyo guud ahaan dowladaha dalalkaasi, laakiin Soomaaliya oo deeqo badan ka heshay dalalka Turkey, China, ganacsadaha Shiinaha ee Jack Ma, Hay’adaha Q/Midoobay ee WHO iyo kuwo kale, ayna soo gaaren kumanaan kun oo qalabka wax lagu baaro ah ayaa qarineysa xogtan muhiimka ah oo si ulakac ah kusii wada inaysan soo hadal qaadin, lana wadaagin shacabka iyo warbaahinta.
Inkastoo saddex Sheybaar oo cudurka lagu baari karo laga hirgeliyey Muqdisho, Garowe iyo Hargeysa, waxaa haddana weli jira in kiisaska loo qaado magaalada Nairobi ee dalka Kenya si loogu baaro.
Warbixintii ugu danbeysay UNOCHA qeybta Soomaaliya waxaa lagu sheegay in ilaa 6-dii May 2020 dadka lagu baaray sheybaarka dowladda ee Muqdisho ay gaarayaan 1238 kiis, halka 239 kiis oo kale loo diray magaalada Nairobi.
Dhinaca kale Wakaalada wararka AP ayaa Hay’adda Caafimaadka adduunka ee WHO kasoo xigatay maanta in Soomaaliya lagu baaray kiisas gaaraya 2,700, waxaana halkaasi ka muuqda inay aad u kooban tahay tirada dadka laga baaro cudurka, taasoo aan sawir cad ka bixin karin heerka uu cudurka gaarsiisan yahay.
Dalalka Bariga Afrika qaarkood waxay si joogto ah u shaaciyeen tirada dadka ay guud ahaan ka baareen cudurka Covid-19 sida hoos ku qoray.
Wasaaradda Caafimaadka oo shalay hawada gelisay website cusub oo lagala soconayo xogta Cudurka Coronavirus ee Soomaaliya ayaa mar kale si kutalagal ah looga reebay tirada dadka aga baaray cudurka, waxaana isha xogtan laga helo ay noqotay Hay’adaha Q/Midoobay oo soo saara warbixinno toddobaadle ah oo ku saabsan xaaladda cudurka.
Jabuuti oo dadkeena lagu qiyaasay 988,000 (ku dhowaad Hal Milyan) ayaa cudurka ka baartay dad ku dhow 17000 qof, waxaana marka la eego tirada yar ee dadkeeda ay ka mid tahay dalalka ugu baaritaanka badan cudurka Afrika, taasoo keenay inay ilaa xad xakameyso cudurka, dadka u dhintayna ay kaliya yihiin 4 qof iyadoo tirada dadka laga helay cudurka ay isla mid yihiin Soomaaliya (1284 qof).
Dowladda Soomaaliya waxaa laga sugayaa inay si daahfuran u shaaciso, dadkana ula wadaagto xogta cudurka Coronavirus oo dhammeystiran, iyadoo ay xaqiiqo tahay in tiro aad uga badan kuwa ay shaaciso Wasaaradda Caafimaadka ay qabaan ama u dhinteen cudurka Covod-19 gudaha dalka.
Previous articleHormuud Foundation iyo Salaam bank oo Deeq Lacag ah gaarsiiyay 200 oo Qoys oo Danyar ah
Next articleKenya oo Coronavius dartiis joojisay Dadka iyo Gaadiidka kasoo gala xuduudka Soomaaliya